Raisal-wasaaraha Dalka Iyo Mw CMC Oo Addis Uga Ambabaxay Dhanka Kenya-mooyaale - Cakaara News
Raisal-wasaaraha Dalka Iyo Mw CMC Oo Addis Uga Ambabaxay Dhanka Kenya-mooyaale
Kenya-mooyaale(CN) Isniin, 7dii December 2015, Wafti balaadhan oo uu hogaaminayo rasial wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay kamid ahaayeen: madaxwaynaha dawlada deegaanka oromiya mudane mukhtaar khadiir, wasiirka wasaarada arimaha dibada mudane Dr. Tewodros Adhane, wasiirka wasaarada arimaha federaalka iyo horumarinta reer miyiga mudane kassa teklebirhan ayaa saaka xarunta dalka ee Addis uga ambabaxay dhanka Kenya-mooyaale iyagoo kusocdaalay diyaarada khaaska ah ee raisalwasaaraha dalka.
Waftigan balaadhan ayaa shir heer caalami ah Kenya-mooyaale kulayeeshay wafti kasocday dalka Kenya oo uu hogaaminayo madaxwaynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta oo ay weheliyaan: wasiirka arimaha dibada marwo Aamina maxamed jibriil, gudoomiyaha countyga mersabit mudane Ukur Yatani, gudoomiyaha countyga mandhera mudane Ali Roba.
waxaana kulankan kaalin laxaad leh kaqaatay mas'uuliyiin sare oo kasocotay hay'ada U.N
Ujeedada shirkan ayaa ahayd horumarinta iskudhafka ah ee xuduudaha labada dal iyadoo xaflad lagu daah-furayay mashaariico waa wayn oo dhanka jidadka, caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo beeraha ah loo sameeyay.
kulanka xafladan ayaa waxaa dhanka dawlada itoobiya u hadlay raisalwasaaraha dalka mudane hailemariam desalegn iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in horumarinta iskudhafka ah ee xuduudaha labada dal ay muhiimad wayn u leedahay shacabka labada dhinac iyo waliba kor u qaadida xidhiidhka labada dawladood.
waxaa kale oo isla dhinacan kahadlay suldaan maxamed xasan gamaame oo kamid ah odoyaasha deegaanka.
Sidoo kale, waxaa dhanka dawlada Kenya u hadlay madaxwayne Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arimaha dibada oo xusay muhiimada horumarinta iskudhafka ah ee labada wadan.
Hadaba, shirkan oo ahaa mid mudaba qorshaysnaa ayuu madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar socdaalkii horumarinta cagaaran ee uu kusoo maray gobolada jarar, qoraxey iyo doolo dhexda kaga yimid si uu uga qaybgalo.
Kadibna, waxaa heshiis labada dhinac ah kalasixiiday wasiirada arimaha dibada ee labada wadan
Ugudanbayna, waxaa shirkan lagu soo xidhay heesaha qaranka ee labada dal. kadibna, waxay raisal wasaaraha iyo waftigiisu kusoo laabteen xarunta dalka ee Addisababa iyadoo raisal wasaaraha iyo madaxwaynaha DDSI ay maalinta bari ah uga duuli doonaan dhanka Gambella.